GNOME Shell ... qadiimiga ah sida ugu fiican dash | Laga soo bilaabo Linux
GNOME Shell ... sida ugu fiican ee qadiimiga ah sida dash
Tina Toledo | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux
Markii aan ku jiray sanadkii ugu horreeyay ee shahaadadayda qaabaynta qaabdhismeedka, mid ka mid ah waxyaabihii ugu horreeyay ee aan barannay ayaa ah inay jirto maxim ku habboon naqshadeynta guud ahaan "Foomku wuxuu raacaa shaqada". Erayada fudud, waxa loola jeedaa waa in shay kasta oo la qorsheeyey -jaantus, dhisme, goob dadweyne ama xitaa softiweer- Waa in la sameeyaa iyadoo laga fekerayo cidda isticmaali doonta, sida ay u isticmaali doonaan iyo xitaa caadooyinkooda.
Maanta adduunka xisaabinta ficil ahaan waxaa xukuma aaladaha mobilada sida kiniiniyada, taleefannada gacanta iyo buugaagta xusuusta waana mid ku jirta xaaladdan -oo si hufan isaga loogu talagalay- in qaabeynta GNOME Shell waa la fikiray waana la xaqiiqsaday. Waxay halmaameen kaliya hal "waxyar" faahfaahin ah: aaladahaan oo dhan waxaa loo isticmaalaa qaab aad uga duwan kan PC desktop-ka dhaqameed.
Dhibaatooyinka ay la kulmeen kuwa naga mid ah ee marka hore adeegsada GNOME Shell Waxay yihiin:
1.-Ficillada guud ee ay tahay inaan ku qabanno jiirka, sida jiididda iyo daadinta wax, ama xulashada barnaamij si loo furo, waxay noqdeen kuwo aad u dhib badan tan iyo markii ay ahayd in lagu qaado tallaabooyin aad u tiro badan, kuwaas oo Sharciga Fitts.
Marka laga eego aragtidayda, dhibaatada halkan ka jirtaa waxay tahay in astaamaha loo adeegsado ay aad u ballaaran yihiin oo ay ka hortagayaan abuurista liis aad u kooban, kaas oo u baahan kala-qaybis ay tahay in lagu helo hal ama laba qasabno dheeri ah. Tan, oo ah wax caadi ah oo waxtar u leh aaladaha la qaadi karo maxaa yeelay shaashadahooda badanaa waa yar yihiin, kumbuyuutarka kumbuyuutarka wuxuu u taagan yahay cillad maaddaama aysan isku mid ahayn in lagu tilmaamo astaan ​​leh caaradda farta shaashad yar, marka loo eego a tilmaame uu hagayo jiir shaashad weyn.
2. -Tani waxay ina keenaysaa sharciga labaad ee la iska indhatiray: Sharciga Hick taasi waxay ku tukataa sidan; "Waqtiga ay qaadanayso in go'aan la gaadho way sii kordhaysaa iyadoo ay badanayaan tirada xulashooyinka kale".
Qodobkani wuxuu la socdaa kii hore, tan iyo markii ay sii kordhayaan tirada saamiyada -ama guji guji- si aad u raadiso -maxaa yeelay arrimihu ma ahan sidii ay markii hore ahaayeen- ka dibna furitaanka codsi ama galka sidoo kale waxay tusineysaa sameynta go'aan kale: ma waxaan u isticmaalaa jiirka si aan u socdo ama ma sii daayaa oo waxaan u adeegsadaa kumbuyuutarka si aan u raadiyo anigoo isticmaalaya ikhtiyaarka ah "Ku qor si aad u raadiso" ee dashka?
Tani waa tusaale uun, laakiin ficillo badan ayaa ka jira gudaha GNOME Shell taas oo ina horkeenaysa laba daran mid dooro.
3.-Qodobkani waa, fekerkeyga, midka ugu muhiimsan dhamaantiis: inta badan ficilada aan ku sameyno kumbuyuutarka kumbuyuutarka waa ficillo la sameeyay ku dhowaad dareen, natiijada sanado badan oo isla sidaas ah
Aynu ka fikirno darawal muddo sannado ah waday gaari kaas oo baydalka baaligu uu ku yaal bidix iyo xawaaraha xawaaraha ee dhinaca midig oo si lama filaan ah u ogaanaya inuu qasab ku wado baabuur beddelkiisa la beddelo, taas oo ah, baaldegga birigu waa midig iyo ceejinta bidix.
Way cadahay in awoodaada wadista ay xumaan doonto, hanaanka waxbarashaduna gaabis noqon doono maxaa yeelay marka hore waa inaad ilaawdaa wixii horeyba loogu yaqaanay la qabsiga xaalada cusub.
Nasiib wanaag waxyar GNOME Shell ayaa ka soo kabanaysay wajigaas si aad u caan ah kuwa naga mid ah oo miiska la qabsada "caadi ah" iyada oo loo marayo kordhinta caanka ah, illaa iyo inta aan annaga ku qasabnay inaan la shaqeyno nidaamyo kala duwan oo hawlgal -Mac OSX, Linux y Windows- mar dambe ma nihin "Beddel" in loo isticmaalo mid ama deegaan kale.
Waqtigan xaadirka ah, xaqiiqda ah inay jirto a GNOME Shell taas ayaa loo isticmaali karaa iyada oo loo marayo jajabinta iyo mid kale oo u dhaqma sida caadiga ah, iyo in aan wali u baahan nahay in aan cadeyno Qoraxda
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » GNOME Shell ... sida ugu fiican ee qadiimiga ah sida dash
Guul wadar ah oo lagu galo kooxda Laga soo bilaabo Linux
Xaqiiqdii + 1 😀
Tan waxaan kugu soo dhaweynayaa TinaRuntii waa wax lagu farxo inaad ogolaatay inaad halkaan wax ku qorto, sidaan horeyba kuugu sheegay ... aragtidaada / aragtidaadu shaki la’aan waa cajiib.
Ku soo dhowow kooxda 🙂
Ku soo dhowow markabka 😀
Marka hore, soo dhawow Tina! Runtu waxay tahay inaad ku saxantahay waxyaabo badan, laakiin hada waxaan laqabsaday Gnome Shell runtiina waxay tahay in waxyaabaha qaar ay aniga igula raaxeystaan ​​(sida Empathy, mahadsanidiisa is dhexgalka) mararka qaarna waxaad ubaahantahay inaad wax khatar gasho cusub, badan Mararka qaarkood way khaldan yihiin, laakiin marar badan oo kale waa kacaan. Uguyaraan waxaan aragnaa inaan heleyno xalal sida kan xiga Linux Mint qolof, uguyaraan rajo malahan 😉
Waan ku raacsanahay faalladaada, way fiicantahay in la dhaleeceeyo waxa aanaan jeclayn midnimo iyo qolofta gnome maxaa yeelay taasi waxay qayb ka tahay xorriyatul qowlka laakiin waxa haboon in lagu xisaabtamo ayaa ah in mashaariicdan oo kale ah (midnimo iyo qolofta gnome) ku dhashay habeenkiina waa wax soo saarka dadaalka dad badan waxaana qabaa in, iyadoo aan loo eegin haddii aan jeclaanno iyo in kale, aan ku faraxno in wax ka duwan la soo bandhigay. Ugu dambeyntiina, waxa wanaagsan ee ku saabsan barnaamijka bilaashka ah ayaa ah inay jiraan xulashooyin aan dhammaad lahayn; )
Maqaal aad u wanaagsan !! Aniga aragtidayda go'aanka kooxda kde wuu ku guuleystey. Ku bilow mashruuc dhinac ah oo leh 'Plasma Active' oo ka duwan jawiga desktop-ka.
Haa guul badan 😀
Waa dhibaatada weligeed ah ee barnaamijyada, sida caadiga ah waxaan horumarinnaa sida aan wax u fahanno nafsadeena si dhib ahna waligeen uma joojinno inaan ka fikirno "waxa" iyo "sidee" ayaa faa'iido badan uga heli kara isticmaaleha (Waan ku markhaati kici karaa XD).
Taasi waa sababta aan u jeclaaday falanqayntaada, ma aha oo kaliya inaad siiso qodobkaaga isticmaale ahaan, waxaad sidoo kale daabacdaa khibradaada meelaha kale, Hambalyo!
Waan jeclahay dib u eegista naqshadahan.
Sannadkan waxaan ku arkay dhowr bog oo ay kaga hadleen sharciga Fitts-ka wuuna igu dhegay, haddana waxaan haystaa sharciga Hick oo la igu qoray 😀
Kaliya kuma eka raaxada kombuyuutarka dhaqameed, laguma isticmaali karo netbook taabasho aan taabasho lahayn.
Laakiin iyaga ayaa ku mahadsan, sanadkan 2011 wuxuu ku qurux badnaa daahfurka waxyaabo cusub, sahamin, isku day wax walba. Baro Xfce, Debian, ... Waxaan rajaynayaa in sanadka 2012 ay ka buuxaan waxyaabo cusub (inkasta oo aysan iyagu marnaba ahayn kuwa doonaya inay dibadda igula qasbaan
Oh, iyo Tina Toledo soo dhawow.
Maqaal wanaagsan, inkasta oo ay tahay inaan qirto in markaan ku arkay cinwaanka cinwaanada Thunderbird, waxaan u maleeyay inay ahayd qoraal ay la socoto 24 saac oo dib-u-dhigis ah. Ku saabsan Maalinta Nacasyada Abriil.
Haa, waan ku raacsanahay wax walba.
Waxaan u maleynayaa Gnome shell ama Midnimo, waa uun beta. Aad u qurux badan, ama raaxo u leh qaar.
Aad baad ugu mahadsan tihiin dhammaantiin soo-dhaweynta waxaanan ku faraxsanahay inaad ka heshay maqaalkeygii ugu horreeyay.
Waad salaaman tihiin soona dhawow, qodobku wuu guulaystay, waayo aragnimo shaqsi ahaaneed waxaan kuu sheegayaa inaan isticmaalayay qolofta gnome dhawr bilood inkasta oo si qurux badan aan u arkaa qurux iyo xarrago, isticmaalka aan u arko "culeys badan" iyo daal taas oo ka dhigaysa waxaan u xiisay wax badan "fudud" sida Xfce.
10 sababood oo wanaagsan oo aan loo isticmaalin Linux